Ny fomba hahombiazan'ny sekoly
Ho an'ny Mpianatry ny olon-dehibe Torohevitra ho an'ny mpianatra adolantsento
Avy amin'ny boky nosoratan'i Jacobs sy Hyman "The Secrets of College Success"
Ao amin'ny bokiny, The Secrets of College Success , Lynn F. Jacobs sy Jeremy S. Hyman dia mizara torohevitra mikasika ny fomba mahomby ao an-tsekoly. Nisafidy ny fankafizanay izahay mba hizara aminareo amin'ny "The Habits of the 14 College of Top College Students."
Jacobs dia mpampianatra tantara art ao amin'ny Oniversiten'i Arkansas ary nampianatra tao Vanderbilt, Cal State, Redlands, ary NYU.
I Hyman dia mpanorina sy lehiben'ny mpikaroka ny tetik'adin'ny Mpitarika. Nampianatra tao UA, UCLA, MIT, ary Princeton izy.
Ny fandehanana fandaharam-potoana dia toy ny fahaiza-manao fototra mahazatra, fa mahagaga ny habetsahan'ny mpianatra tsy mampiseho ny fifehezan-tena ka tokony hahomby. Mety misy ifandraisany amin'ny fampiroboroboana ny fahafinaretana avy hatrany. Tsy fantatro. Na inona na inona antony, ireo mpianatra ambony dia manana fifehezan-tena.
Manana boky mahafinaritra koa izy ireo , ary isaky ny fe-potoana iray monja, ny fanendrena, ny fotoam-pianarana ary ny fitsapana dia ao anatiny.
Jacobs sy Hyman dia manoro hevitra fa ny fijerena ny fijerin'ny vorona iray amin'ny sehatra iray manontolo dia manampy ireo mpianatra hanaraka ny voalanjalanja sy hisoroka ny tsy ampoizina. Milaza ihany koa izy ireo fa ny mpianatra ambony dia mizara ny andraikitra amin'ny fandaharam-potoanany, mandalina ny fitsapana mandritra ny fe-potoana herinandro fa tsy amin'ny fianjeran'ny fianjerana.
Mialà amin'ny namana tia
Tena tiako ity iray ity, ary zavatra tsy azonao jerena amin'ny boky izany. Ny fitaoman'ny namana dia tena mahery. Raha mihantona amin'ny olona izay tsy manohana ny faniriana hahombiazanao any am-pianarana ianao, dia milomano mialoha. Tsy voatery haka ireo namana ireo ianao, saingy mila mametra ny fifandraisanao amin'izy ireo mandritra ny taom-pianarana.
Mitondrà namana izay manana tanjona mitovy aminao, ary miandrandra ny fisidinan'ny fanahinao ary miakatra ny toeranao, miakatra.
Na tsara kokoa aza, mianatra miaraka amin'izy ireo. Ny vondrona fianarana dia afaka manampy tokoa.
Sariho ny tenanao
Mahatalanjona ny zavatra azontsika atao rehefa mieritreritra be isika. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahafantatra fa tena mahery ny sain'izy ireo , ary ny ankamaroantsika dia tsy mahavita na inona na inona amin'ny zavatra azontsika.
Hoy i Michelangelo: "Ny loza lehibe indrindra ho an'ny ankamaroantsika dia tsy mametraka ny tanjontsika loatra ary manjavona, fa amin'ny fametrahana ny tanjontsika ambany ary ny fanatanterahana ny marika."
Manahirana ny tenanao, ary azoko antoka fa ho gaga ianao.
Jacobs and Hyman dia mandrisika ireo mpianatra hieritreritra am-pahibemaso rehefa mamaky, mandray anjara feno ao am-pianarana, "hianjera amin'ny fanontaniana" rehefa mandray fitsapana ary hamaly azy ireo "mivantana sy feno".
Manoro hevitra izy ireo fa ny zavatra iray izay mitranga foana amin'ny mpampianatra dia mikaroka lanja kokoa ny dikan'ny dikany sy ny "lamin'asa" rehefa manoratra taratasy.
Manokàna ho an'ny Feedback
Ity ny tendro iray hafa izay tsy dia mahazatra loatra amin'ny printy. Mora ny ho lasa fiarovana raha mifanandrina amin'ny fanehoan-kevitra. Fantaro fa fanomezana ny fanomezana valiny ary miambina amin'ny fiarovana.
Rehefa mijery valim-panadinana ianao ho fampahalalana dia afaka mivoatra amin'ireo hevitra izay mahatsapa ho anao sy manala hevitra izay tsy. Rehefa avy amin'ny profesora ny fanamarihana dia miezaha hijery tsara azy. Mandoa azy ianao hampianatra anao. Matokia fa manan-danja ny fampahalalam-baovao, na dia andro vitsy aza no hitrangan'izany.
Jacobs sy Hyman dia miteny fa ireo mpianatra tsara indrindra dia mandalina ny fanehoan-kevitra ao amin'ny taratasiny sy ny fanadinany, ary mamerina ny fahadisoana nataony, ny mianatra avy amin'izy ireo. Ary mamerina ireo fanehoan-kevitra ireo izy ireo rehefa manoratra ny andraikitra manaraka. Izany no ianarantsika.
Anontanio rehefa tsy azonao
Izany dia tsotra, eny? Tsy izany foana. Maro ireo zavatra izay afaka mitazona antsika amin'ny fananganana tànana na ny famerenana an-tsorok'izy ireo aorian'ny kilasy mba hilaza fa tsy mahazo zavatra isika. Izany tahotra tsara hatry ny fahakiviana izany, ny mijery tsisy saina.
Ny zava-misy dia, any am-pianarana ianao hianatra. Raha fantatrao ny zava-drehetra momba ny lohahevitra nodinanao, dia tsy ho eo ianao. Ny mpianatra tsara indrindra dia mametraka fanontaniana.
Raha ny marina dia mitazona ao amin'ny bokiny "The Global Achievement Gap" i Tony Wagner, fa mbola manan-danja kokoa ny mahafantatra ny fomba fametrahana fanontaniana mifanohitra amin'ny mahafantatra ny valiny marina. Izany dia lalindalina kokoa noho izay mety hitranga. Eritrereto izany, ary manontania fanontaniana.
Tadiavo ny isa voalohany
Ny mpianatra olon-dehibe dia mora kokoa noho ny olon-kafa mametraka ny filany manokana ho an'ny olon-drehetra. Ny ankizy dia mila zavatra ho an'ny tetik'asa. Mahatsiaro ho tsy raharahaina ny namanao. Ny lehibeny dia manantena anao ny hitazona tara amin'ny fivoriana manokana.
Tsy maintsy mianatra miteny ny tsia ianao ary mametraka ny fianaranao voalohany. Eny ary angamba ny zanakao no tokony ho tonga aloha, fa tsy ny fangatahana kely ihany no tokony ho tonga haingana. Sekoly no asanao, i Jacobs sy Hyman dia mampahatsiahy ny mpianatra. Raha te hahomby ianao , dia tokony ho laharam-pahamehana izany.
Mitazà tena amin'ny endriny ambony
Raha toa ka efa mandanjalanja ny asa, ny fiainana ary ny kilasy, ny fijanonana amin'ny endrika dia mety ho ilay zavatra voalohany izay mamoaka ny varavarankely. Ny zavatra dia, ianao dia handanjalanja kokoa ny ampahany amin'ny fiainanao rehefa mihinana tsara sy mampihatra.
Milaza i Jacobs sy Hyman fa "ireo mpianatra mahomby dia mitantana ny filàn'izy ireo ara-batana sy ara-pihetseham-po araka ny tokony ho izy ny zavatra ilain'izy ireo."
Nahoana ianao no niverina tany am-pianarana ? Mba hahazoana io diplaoma io efa nofinofinao nandritra ny taona maro? Mba hahazoana fampiroboroboana amin'ny asa? Mba hahafantarana zavatra nahafinaritra anao foana? Satria ny rainao dia te-te-ho anao foana ...?
"Ny mpianatra tsara indrindra dia mahalala hoe nahoana izy ireo no any amin'ny oniversite ary inona no ilainy hatao mba hahatratrarana ny tanjony," hoy i Jacobs sy Hyman.
Afaka manampy isika. Jereo ny fomba hanoratana ny tanjona SMAART . Ireo olona izay manoratra ny tanjon'izy ireo amin'ny fomba manokana dia mahatratra azy ireo kokoa noho ny olona izay mamela ny tanjon'izy ireo eo amin'ny lohany.
Ahoana no hamakiana bebe kokoa?
Ny fomba hahitana ny asa tadiavinao sy ianaranao izay tokony ho fantatrao
Tokony hividy mari-pankasitrahana GED na dokam-barotra ve ianao?
Fianarana ho an'ny mpianatra miaraka amin'ny fomba fianarana auditor
Lisitry ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpianatra adolantsa miaraka amin'ny fomba fianarana kinesetetik
Fomba 5 hanatsarana ny fahaizana mamaky teny sy manoratra
Fianarana fianarana eo amin'ny toeram-piasana
8 Fahasalamana hamoronana ny fiainana tianao
Nahoana ianao no tokony hanoratra fanandramana fanao mandritra ny fianarana?
Miverina any amin'ny kolejy ho alalana
Ny fomba hanoratana ny taratasy fikarohana izay mahomby amin'ny A
Ny "Happy Accident", "Ory mahafatifaty", ary ny famoronana
2015 Yamaha R1 eny an-dalana: Ny Seat of the Hats Review
Manao ahoana ny habetsaky ny fampielezam-baovao?
Ny tantaran'i Quito
Ny fomba hanamboarana ny "mpikarakara" (handamina) amin'ny teny Frantsay
Afaka mahazo tatoazy ve ny silamo?
Teny nalaina momba ny karazana tandindonin-doza
Sagittarius ilay Archer - Zodiac mirakitra
Ahoana ny famerenana ny fanafihana anakonda
Ny fizaran-tany momba ny natiora
Louie Giglio Biographie
Ny fitafy ny maitso
Hevi-baventy nolavina: Vatana mangatsiaka, ampahany I
Ahoana ny fomba fanaovana pentina madio
Fanadihadiana momba ny fizotran'ny fitrandrahana DoD
Ahoana ny fomba handresena ny tebiteby?
Inona no atao hoe krustaceana?
Inona ny fahasamihafana simitera?
Tantaran'ny Trakasiona Automotive Trabant Classic
Bilaogy Interest tsotra sy valiny
Tantara fohy momba ny simika simika
Ny tombony amin'ny fiankinan-doha amin'ny Nitrox
Ny Boky Comic Books Tsara Indrindra